23 | September | 2007 | Layma's World
သူရဲကောင်းများ နှင့် တွေ့ ဆုံခြင်း ( ဇာတ်သိမ်း)…
Posted on September 23, 2007 by layma
“… ကျွန်မ မရွေးချယ် တတ်တော့ဘူး …၊ ရှင်တို့အားလုံး ပြန်ကြတာပဲ ကောင်းပါတယ်….”
“…ညီမလေး မဆုံးဖြတ်တတ်ရင် အစ်ကို ဆုံးဖြတ်ပါမယ် … ကောကျင့် …၊ ယွင်ဖေးရန် …၊ မင်းတို့လဲ သိုင်းလောကသားတွေပဲ ….၊ ရှည်ရှည်ဝေးဝေး ပြောစရာမလိုဘူး …၊ ငါတို့ သိုင်းလောကမှာ … ပြသာနာ တစ်ခု ဖြစ်ရင် ဖြေရှင်းနေကြ အတိုင်း … ”
အစ်ကိုကျန်က ပြောရင်းဆိုရင်း ဓါးအိမ်ကဓါးကို … ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် … ။ နေရောင်တွင် လက်ခနဲ ဖြစ်သွားသော ဓါးသွားကို ကြည့်ရင်း … သူမ … တားဖို့ ကြိုးစားလိုက်သည် … ။ သို့သော် ဖေးလေးက သူ့ ရဲ့ ပိုးသိုင်းကို ပြဖို့ … အသင့်ဖြစ်နေသလို ၊ ကောကျင့်ကလည်း သူတတ်သမျှ သိုင်းပညာဖြင့် … စတင် ယှဉ်ပြိုင် တော့သည် … ။
ပြိုင်ပွဲမှာ တဖြည်းဖြည်း ကြမ်းလာ၏ … ။ ကျန်ကျောင်းက မြေပေါ်မှခွာ၍ အထက်မှ တိုက်ခိုက်သလို … ယွင်ဖေးရန်ကလည်း… သူ၏ မြင့်မားထွားကျိုင်းသော ခန္ဓာကိုယ်ကို လှပစွာ လှုပ်ရှားကစား၍ ယှဉ်ပြိုင် သည် … ။ ကောကျင့်မှာလည်း အရှောင်အတိမ်း အသတ်အပုတ်များနှင့် အစွမ်းကုန် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ် နေ၏… ။
ပြိုင်ပွဲမှာ ပို၍ ပြင်းထန်လာပြီး … သုံးယောက်စလုံး … ဒဏ်ရာကိုယ်စီ ရလာကြ၏ … ။ သူမ ဘာလုပ် ရမည်နည်း … ။ သူသေကိုယ်သေ အပြိုင်နွဲနေကြသော ထိုသုံးယောက်ကိုလည်း တား၍မရ … မည်သူ့ ကိုမှ လဲ အဆုံးမခံနိုင် …..။ ကျွန်မသာ မရှိရင် သူတို့ ဒီလို တိုက်ကြမှာ မဟုတ်ဘူး … ။
“ ပွင့် … လာ…..ပြေးကြ….စို့ ….ကျွန်တော်က သူတို့လို ချတဲ့ သိုင်းတော့ မတတ်ဘူး ….၊ ပြေးတဲ့ သိုင်းတော့ တတ်တယ် ….”
ဟုဆိုကာ သူမ၏လက်ကို … လူတစ်ယောက်က ဆွဲ၍ ပြေးလေသည် … ။ သူမလည်း ဘာမှ စဉ်းစားမနေ ဘဲ သူ့ နောက်ကို လိုက်ခဲ့မိသည် … ။ သူမ ဆက်မပြေး နိုင်တော့၍ …ရပ်လိုက်မိသည် … လက်ကို ရုန်း၍ ထိုသူကို သေချာကြည့်လိုက်သည် … ။
“ ဟောတော့် … ကို မင်းမင်း….”
သူက သူမ ဘယ်လိုငြင်းငြင်း ဇွဲမလျှော့တမ်း အသည်းအသန် လိုက်နေသည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလေး ကိုမင်းမင်း …။ ထိုသူက သူမကို ခပ်ပြုံးပြုံးကြည့်ပြီး …
“ ကျွန်တော့်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပြီပေါ့နော် … ” ဟုပြောလေသည် …။
သူမ၏ စိတ်တိုစွာ အော်လိုက်သံက ဟိန်းထွက်လာသည်….။ သူမ သတိထားမိတာ ကတော့ ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလို့နေသည် … ။ ဇာခြင်ထောင် ပန်းရောင်နှင့် စောင်အနီလေး …..။
“ ဒါတွေ ဘယ်ကရောက်လာတာလဲ ….” ဟုရေရွတ်၍ ထထိုင်မိသည် …။ သူမသည်လှပသော အကျီင်္ဖြူလေးနှင့် မဟုတ်ဘဲ ည၀တ်အကျီင်္ မိုးပြာရောင်လေးနှင့် ဖြစ်သည် … ။ သူမသည် လွင်ထီးခေါင်ပြင် တွင် ရောက်ရှိနေခြင်း မဟုတ်ဘဲ နွေးထွေးသော … သူမ၏ အိပ်ရာလေးထဲတွင် သာ… ရှိနေခဲ့ သည် … ။
“….ဟား….ဟား…..ဟား…..” သူမ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ အော်ရယ်လိုက်ပါသည် … ။ သူငယ်ချင်းများနှင့် ပြောခဲ့သော တရုတ်ကားများကို စိတ်စွဲ၍ သူမ အိပ်မက် မက်ခဲ့သည် … ။ ရယ်စရာကောင်းလေစွ …။ တရုတ်မင်းသား သုံးယောက်စလုံးက … သူမအား ၀ိုင်းကြိုက် … နေလိုက်ကြ သေးသည် … ။ သူမအား … ကျောင်းတွင် အသည်းအသန် လိုက်နေသော ကိုမင်းမင်းပင် ပါလိုက်သေး၍ သူမ၏ အိပ်မက်လေးသည် ပို၍ ဟာသမြောက် သွားပေသည် … ။
သူမသည် ရှုပ်ပွနေသော ဆံပင်များကို သပ်တင်ရင်း … ကျေနပ်စွာပြုံးကာ တိုးတိုးလေး … ရေရွတ်လိုက် ပါသည် …။
“ ….ဒီအိပ်မက်ကို မိသွယ်တို့ကို ပြန်ပြောရင် …. ငါ့ကို ….မနာလိုဖြစ်ကြမှာ….အတိအကျပဲ….” …..။ ။
ဇာတ်ကားနာမည်များ သေချာ မမှတ်မိတော့ပါ …။ ဆယ်ကျော်သက်က ဇာတ်လိုက်များလို့နာမည်ပေးသင့် တယ် ထင်တယ်နော် … ။ အဲဒီတုန်းကတော့ သိပ်ကြိုက်တာပဲ …. ခုတော့ … “လီယောင်ဂျေး….ဒါရိုက်တာရင် … ဂျွန်စော … ထယ်စောက် ….so many….so many…” တို့နဲ့ အစားထိုးရေးရမယ် ထင်တယ် … ။ အရီးပန်ရေ … အကုန်လွှတ်လိုက်ရမှာလား … ။
Filed under: Pieces |	4 Comments »